Kudar GIF animated ah shaashadda qufulka ee iPhone-kaaga GIFLock | Wararka IPhone
Mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee JAILBREAK na siiso waa suurtagalnimada in la awoodo U habee qalabkayaga sida aan rabno, adigoo dhaafaya xaddidaadaha ay Apple si asaasi ah noogu soo rogayso nooc kasta oo cusub oo iOS ah kaas oo bilaabaya, inkasta oo noocyadi udambeeyay, shirkada fadhigeedu yahay Cupertino waxay kudarsatay shaqooyin badan oo laga helikaro JAILBILYADA oo kaliya, laakiin marka lagu daro IOS, horumariyeyaashu waxay madaxooda ujiidayaan si ay u bixiyaan habab cusub oo loo habeeyo marka lagu daro noo ogolaanaya inaanu horumarino wax soo saarka. Qeybta u qaabeynta gudaheeda, maanta waxaan kahadleynaa GIFLock tweak, tweak oo noo ogolaanaya inaan ka xusho wixii GIF ka ah sawirkayaga sawir oo aan ku darno shaashadda qufulka.
Toddobaad ka hor waxaan ka hadlay tweak oo noo ogolaaday inaan ku darno koox Pokémon shaashadda qufulka ee iPhone-keena. Asal ahaan tweak wuxuu u shaqeeyaa si aad u la mid ah GIFLock, isagoo ku daraya feyl dhaqaaqa GIF illaa hoose ee shaashadda qufulka. Faylasha GIF waa habka cusub ee lagu muujiyo niyadda, falcelinta, dareenka ... Haddii aad tahay GIF jecel ama aad rabto inaad sii hagaajiso shaashadda qufulkaaga ee 'iPhone' ee 'GIFLock', waad sameyn kartaa dhib la'aan.
GIFLock wuxuu la shaqeeyaa dhamaan faylasha GIF ee aan ku keydinayno Safari ama kuwa aan si toos ah uga helno barnaamijyada fariimaha kala duwan ee ay hayaan. Inta u dhexeysa qaabeynta qaabeynta waxaan awoodnaa dejiso sawirada dhaqaaqeysa ee aan ku darno si ay ugu habboonaato ballaca qalabka si toos ah, iyadoon loo eegin cabirka feylka. Sidoo kale, haddii aan isticmaalno GIF-yada leh asal hufan, waxaan dejin karnaa midabka asalka ah ee aan dooneyno inaan soo bandhigno.
GIFLock waxaa loogu heli karaa bilaash si aad u soo dejiso adoo adeegsanaya BigBoss repo Taasi waxay ku timaaddaa si asaasi ah oo lagu rakibay aaladdayada markii aan jabay. Sida laga soo xigtay soo-saaraha, wuxuu cusbooneysiin doonaa tweak-ga wax yar ka dib isagoo ku daraya shaqooyin cusub oo noo oggolaanaya inaan ku raaxeysano noocyada faylasha ee ku jira iPhone-keena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 9 » Kudar GIF animated ah shaashaddaada qufulka 'iPhone' ee 'GIFLock'
Bateriga ma cunaa mise si fiican buu u qabtaa?
Ku jawaab Ibán Keko
Galaxy S8 waxaa ku jiri kara kamarad laba dhinac ah